KHARASHKA BARADHO EE UKRAINE AYAA SI DEGDEG AH U KORDHIN DOONA - UKRAINE
Horeba bishan, waa in aan ka filanno kororka sicirka ee khudaarta "borsch set". Kuwaasina, qiimaha ugu sarreeya wuxuu u kici doonaa baradho iyo basasha. Beertu waxay ka bilaabantaa in si wayn loo boodo, beeruhu way ka sii darayaan, beeralayda way dhintaan, sidaas darteed qiimaha baradhadu si dhakhso ah ayey u korodhay, sidoo kale karootada iyo kaabashadu waxay sidoo kale waayaan qiimaha la iibsado qiimaha khudaarta ayaa sidoo kale saameeyay kororka qiimaha shidaalka. Kharashka gaadiidka ayaa hore loo isticmaalay 85 koban oo kiiloogaraam ah walxaha, iyo hadda - 1.3 hryvnia. trichestvo iyo kirada dhismaha waxaa si weyn u kordhay qiimaha lagu kaydin jiray oo khudaar dukaamada cuntada. Kororka qiimaha sare ayaa dhici doona bisha Maarsomarka kharashka kilo ee baradhadu ku saabsan tahay 8 hryvnia. Qiimaha basasha ayaa gaari doona 10 hryvnia".
Beeralayda Ukrayna maaha wax ku filan, Sanadkii la soo dhaafay way yaraadeen, laakiin beeralayda ayaa ku badbaadey wax soo saarka, dalaggu wuxuu u muuqday mid tayadoodu liidato, taasoo keentay baahida loo qabo in la iibiyo khudaarta illaa December. "Ayuu yidhi Tatiana Getman, oo khabiir ku leh suuqa miro iyo khudradda. Waqtigan xaadirka ah, waxay ku kacaysaa 4.3 hryvnas halkii kiilo, laakiin toddobaadkii, qiimaha ayaa kor u kacay illaa 15% oo kaliya oo sii kordhi doona, oo aanad rajeyneynin khudaarta dibedda laga keeno dalalka kale. Qiimaha tafaariiqda ee Eurasia ee khudradda ayaa leh fursado ay ku gaari karaan 12-16 hryvnia halkii kiilo. "